३२ लाख कित्ता शेयर थपियो, कसको कति ? - ३२ लाख कित्ता शेयर थपियो, कसको कति ?
२०७५, २४ माघ, 04:49:34 PM
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा ३२ लाख १८ हजार १ सय ३७ कित्ता शेयर सूचीकृत भएको छ । जसमा सीटी एक्सप्रेस फाइनान्सको २५ लाख कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ भने यता नयाँ नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६ लाख कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ ।
यस्तै हाम्रो विकास बैंकको १ लाख १८ हजार १ सय ३७ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । नयाँ नेपालले गत साउनमा हकप्रद बिक्रि गरेको थियो भने सिटि एक्सप्रेसले गत भदौमा हकप्रद बिक्री खुला गरेको थियो । हाम्रो विकास बैंकले कात्तिकमा बोनस शेयर पारित गराएको थियो । सोही शेयर अहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको हो ।
यस हप्ता वाणिज्य बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण, चार कम्पनीका शेयर स्टकमा सूचीकृत